नेपालमा धर्मान्तरण, भु-रणनैतिक महत्वको आधार | नेपाल दर्शन
नेपालमा धर्मान्तरण, भु-रणनैतिक महत्वको आधार
प्रभात अधिकारी १२ असोज २०७६
नेपालमा धर्मान्तरणको बाटो फुकुवा गर्नकै लागी धर्मनिरपेक्ष लादिएको हो भन्न सकिन्छ । हामी बिना हिच्किचाहट यस तथ्यलाई स्विकार्न सक्छौ । धर्मान्तरण वा इसाइकरण भन्नु धर्मनिरपेक्षको अर्काे अर्थ हो । पछिल्लो १०-१२ वर्षमा नेपालमा भइरहेको इसाई गतिबिधी तथा चर्चहरुको संख्याले यो कुरालाई प्रष्ट्र पार्दछ ।
ईसाइहरुको धर्मान्तरण गराउने योजना अत्यन्त सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको छ । उनिहरुको पहिलो आक्रमण सोझा सिधा जनता, गरिब बिपन्न वर्ग समुदायका जनताहरु पर्ने गरेका छन । केहि हदसम्म बाहुन क्षेत्री संग दलित जनजाती विच द्धन्द वा फाटो सृजना गर्दै धर्मान्तरण गराइएको छ । उनिहरु कुनै एक जातीलाई पुर्ण रुपमा कृश्चियन बनाउने रणनिती अन्तर्गत चेपागं समुदायमा धेरै सफल भएका छन । अहिले तथांक हेर्यौ भने सबैभन्दा धेरै मात्रामा कृश्चियन बनाइएको जाती चेपागं हो । जुन दिन चेपागं समुदाय पुर्ण रुपमा यहाँको मौलिकताबाट च्युत गराई कृश्चियन बनाइन्छ, त्यसपछि अन्य समुदायलाई पनि एक पछि अर्काै गर्दै कृश्चियन बनाइन्छ ।
अलिकती पढे लेखेका हरुलाई जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारिन्छ भने, गरिबलाई केहि समयसम्म खाधान्न दिई वा नगदमै पनि कृश्चियन बनाइन्छ । क्रिश्चियन बने प्रतिबालक २०००, ३००० भन्ने हेडलाइन सहितका समाचारहरु नआएका होइनन । कोहि रोगी बिरामी छन, अस्पतालको पहुँचबाट बाहिर भने सबैभन्दा सजिलो अस्त्र रोग निको हुन्छ भन्ने छदै छ, जुन सिगाें अफ्रिका र भारतमा प्रयोग भइसकेको भरपर्दाे माध्यम हो । मानसिक रुपमा साधारण मानिसलाई अलमल्याउन सफल छट्टु पादरीहरुले अनेक तिकडम अपनाउछन । चर्चमा हुने गतिविधीका बारेमा बताइरहनु पर्दैन जहातही खोजेर हेर्न बुझ्न सकिन्छ । कुनै चर्चमा रुने, कतै कराउने, कतै पशुको झै व्यवहार गर्ने गराउने आदि आदि कार्यहरु गराइन्छ । यस्तो लाग्छ चर्च एक पागलखाना हो, अझ स्पष्ट संग भन्दा चर्च पागलहरुको उत्पादन गर्ने थलो हो । सोझा इमान्दारलाई झुट बोल्न र ढाटन सिकाउने थलो हो । जुन समुदायमा जस्तो कुरा गर्दा वा जसरी सम्झाउदा उनिहरुको दिमाग धमिल्याउन सकिन्छ त्यहाँ सोहि विधि अपनाइन्छ ।
दालितलाई बाहुन क्षेत्रीले हेप्यो भनेर धर्मान्तरण गराइदै छ । मनुस्मृतिमा यस्तो लेख्या छ, वेदमा यस्तो लेख्या छ भन्दै हिन्दु धर्म ग्रन्थको गलत व्याख्या गरेर अनपढ सोझा मानिसहरुलाई भडकाएका छन । वास्तवमा दलित भनिने नेपालका शिल्पी तथा कालिगढहरु नेपाली संस्कृतीका धरोहर हुन, देशभर नेपाली भाषाको प्रचार उनैले गरे, लुगा उनैले सिलाए, मुर्ती उनैले बनाए, धारा पाटि पौवाको निमार्ण देखी देश निमार्णमा हातहतियार पनि उनैले बनाए । भगवान विश्वकर्माका सन्तानहरु कसरी अछुत हुन सक्छन, कसरी समाजबाट बहिस्कृत हुन सक्छन र । यो त समयको कालक्रमअनुसार पेशालाई अपमान गर्ने विचार मौलाउदै जाँदा अन्तमा उक्त पेशामा सामेल वर्ग लाई नै अक्षुत बनाइएको हो । यो सामाजिक कुसंस्कारकै रुपमा रहदै आएको भएतापनि विस्तारै मानिसहरुमा परिवर्तन आउदै छ । समाज परिवर्तशिल छ, परिवर्तन श्वाशत सत्य हो । २०१९ को संविधान र २०४७ को संविधानले जातिय छुवाछुत बिरुद्धको कानुन बनाइसकेको थियो । इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने राजा पृथ्वीनारायण शाहको समयका विषे नर्गेचीको योगदानलाई भुल्न सकिदैन । तर देशमा बाबुराम प्रवृत्ती हावि भएसंगै दलितहरुलाई हिन्दु धर्मबाट च्युत गराउन मद्दत भइरहेको छ । त्यस्ता कुण्ठित बिधर्मी सोच भएका अपराधीक व्यक्तिहरुबाट समाजमा विभाजनको सृजना भइरहेको छ ।
त्यस्तै, जनजातीलाई तिमीहरु हिन्दु होइनौँ, रातो टिका लगाउने होइनौँ, तिमिहरुको कुलदेवता यो हो, त्यो हो भन्दै अन्तमा जिजस संग जोडदै गलत तरिकाले पाठ पढाई धर्मान्तरण गराइदै छ । रातो टिका र सेतो टिका विचको बहस, दशैँ र तिहार जस्ता पर्वहरु जनजातीको होइन भन्ने बहस, हिन्दु देवी देवताप्रती घृणाको भावनाको निर्माण जस्ता कुराहरुले नेपाली समाज लाई विभाजित गराइदै छ । गत वर्ष नेपाबाट प्रधानन्त्रीको सामुन्ने जिजस को छोरी घोषणा भएकै हो । होलिवाइनको प्रशंग सर्वविधितै छ, बताइरहनै पर्दैन । नेपालको जनसङख्या वृद्धिदर २.१ छ भने इसाइको वृद्धिदर १३५ प्रतिशत छ । यही रफ्तार कायम रहने हो भने नेपाल छिट्टै इसाइ मुलुकमा परिणत हुनेछ । यो सोचनिय विसय होइन ?
धर्मान्तरण किन आवश्यक भयो ?
जसरी भुरणनैतिक हिसावले अरब देशहरुको लागी अफगानिस्तान र सिरिया महत्वपुर्ण भुमी हो त्यस्तै दक्षिण एसियाको लागी नेपाल अत्यन्त महत्वपुर्ण भुरणनैतिक भुमी हो । हतियारको व्यापारनै अर्थिक मेरुदण्ड भएका अमेरिकी र पश्चिमका मुलुकहरुका लागी द्धन्द राम्रो बजार हो । त्यसका लागी जात जाती विच एकता भडकाउन आवश्यक हुन्छ । सामाजिक द्धन्द र राजनैतिक द्धन्द त्यसको मियो बन्न सक्छ । संसारको आधा भन्दा धेरै जनसंख्या चिन र भारतमा बस्छन, ति दुबै देशलाई नियन्त्रण गर्नको लागी नेपाल आधार सिविर अवश्य बन्न सक्छ । नेपालको भुरणनैतिक महत्वका कारण नेपालमा पश्चिमा जगत आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चाहन्छन । यसरी नेपालमा प्रभुत्व जमाउन नेपाल देश आर्थिक रुपले गरिव हुनु पर्याे र उनिहरुको शरणमा जानुपर्याे । अब संघियता जस्तो महंगो व्यवस्था नेपालमा किन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भयो । वैदेशिक ऋण, विश्व बैकंहरुको लगानी र युरोपियन युनियन लगायतको भुमिका हेरौ भने अझ राम्रो संग बुझ्न सकिन्छ । नेपालीले धान्नै नसक्ने व्यवस्था लादिदियो, अनि देशलाई आर्थिक रुपले कंगाल बनायो, त्पश्चात देश उनिहरुको हातमा नगएर कसको हातमा जान्छ । जसले लगानी गरेको छ, उसले प्रतिफल त अवश्य लिन्छ नै, ढिलो चाडो मात्र हो ।
नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र संघियताको लागी पश्चिमा राष्ट्रहरु, अमेरिकी शक्ति र चर्चहरुको प्रत्यक्ष भुमिका थियो भनेर अहिले प्रमाणित भैसकेको छ । मानव अधिकार कर्मी भनिने पादरी केभि रोकया र कृष्ण पहाडीहरुको मतलाई ध्यान दिने हो भने यसमा शंका गरिरहनै पर्दैन । भारतिय जासुसी संस्थाका कर्मचारी ले पनि स्विकार गरि सकेका छन पटक पटक । भारतका पुर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जीले अलजेजीरामा दिएको अन्तरवार्ता पनि त्यतिकै प्रख्यात छ । भारतका केहि स्वार्थ र पश्चिमका केहि स्वार्थ एक आपसमा मिल्न गएकाले ति दुवै शक्तिहरु एक ठाउमा आएर नेपालमा परिवर्तन भएको हो भनेर ढुक्क संग भन्न सकिन्छ । फरक यत्ती हो, नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गराउने शक्ति भारतमा अहिले प्रतिपक्ष छ, अहिलेको भारतको सत्तापक्षले पछिल्लो समय नेपालमा भइरहेको गतिविधी अवश्य रुचाएको छैन । चिन पनि यदाकदा यो तथ्यलाई स्विकारेर पश्चिमको भुमिका नेपालमा कसरी निस्तेज पार्न सकिन्छ भनेर लागिपरेको छ । पछिल्लो समय चिन खुल्ला रुपमा आउन थालेको छ । त्यसकारण नेपालमा फेरी एकपटक यो परिवर्तन उल्ट्याउने गरी परिवर्तन हुने अड्कल गर्न सकिन्छ । यदी पश्चिमकै हालिमुहाली हुने गरी यो व्यवस्था रहिरह्यो भने भारत र चिनलाई नेपालको भुमी बाट सुख संग बस्न दिने छैन । भएको यसैका लागी हो । ढिलै भए पनि चिन र भारतले यु कुरा बुझ्ने चेष्टा गरेको जस्तो देखिन्छ ।
नेपालको धर्म परिवर्तनको कारण भुराजनैतिक रणनिती हो र यस संग जोडिएर आउने मुद्धा भनेको स्वतन्त्र तिब्वत पनि एक हो । साथसाथै भारतमा जातिय द्धंन्द र पृथकतावादी आन्दोलनहरु हुन । नागाल्याण्ड, मिजोरम र आसाम हरुलाई तयार गरिदै छ । नेपालमा २ नं प्रदेश भनिरहनु परेन । नेपालको २ नं प्रदेश खम्पा बिद्रोह असफल भएपछिको दोस्रो आयाम हुन सक्छ । नेपालको सिगों देश कव्जा गर्न नसकेपनि छुट्टा छुट्टै भुभागलाई पृथकतावादी आन्दोलन चलाएरै भएपनि उनिहरुको योजना सफल पार्ने रणनिती हो ।
पृथकतावादी आन्दोलन संग जोडिने अर्काे पाटो भनेको नेपालको खनिज सम्पदा पनि हो । त्यस्ता गाँउ ठाउँमा धर्मान्तरण व्यापक बनाइदै छ जहाँ खनिज स्रोत साधन को सम्भावना प्रचुर छ । कतै युरेनियमको लोभ कतै तामा, सुन आदि । यी सबै गर्नका लागी जनतालाई मुर्ख र उनिहरुको भाषा, भेष अनि ग्रन्थ पढने बनाएमा मात्र संभव छ । त्यसैले वाइवल भिडाउनु परेको छ । डा. केभी रोकायकै भाषामा भन्ने हो भने जसरी नेपालमा शान्ती प्रकृयाको लागी अमेरिकालाई मनाउन यहाँका जनतालाई कृश्चियन बनाउनु पर्याे र धर्म निरपेक्ष स्विकार गर्नु पर्याे, भोलि अमेरिका अनुकुलको प्रत्यक्ष राजनिती सफल बनाउन पनि यहाँको जनता वाइवल बोक्ने हुनु परेको हो ।
धर्मान्तरणको धेरै आयामहरु छन । साराशंमा भन्नु पर्दा ,
१, भुरणनैतिक क्षेत्रको महत्ताका कारण (नेपाल; चिन - भारत विचको पुल हुनुका कारण )
२, निरन्तर द्धन्द बजारको निमार्णका लागी (स्वतन्त्र, मिजोरम, नागाल्याण्ड, आसाम, नेपालको २ नं प्रदेश, तिब्बत आदि)
३, यहाँको खनिज स्रोतको नियन्त्रणको लागी
४, तिब्वतको पानी राजनिती
५, चिन र भारतको उदाउदो अर्थिक तथा राजनैतिक हैसियत माथी अवरोध गर्न
६, सभ्यताको मुलभुमी वैदिक जरो र नेपालको पहिचान मेटन
७, नेपालप्रती एतिहासिक दुष्टता, (नेपाल अंग्रेज युद्ध देखिको रिस)
यसका साथसाथै अन्य धेरै विषयहरुका कारण नेपाललाई आतंक र द्धन्दको आधारसिविर खडा गर्नका लागी नियन्त्रण गर्नु परेको हो । यसको मेरुदण्ड भनेको इसाइकरण र वाइवल प्रचार नै हो, ४०० वर्ष देखिको निरन्तरता ।
आज वाइवल भिडायो, भोलि हतियार बोकायो, अन्तमा यहाँको खानी रित्यायो । नेपालीले सबै लुटिइसकेपछि चाल पाउलान कि ।